Horumarka cilmi baarista ee dahaarka loogu talagalay shubista ductile iron epc | Yingyi
Birta Nodular, sida nooc ka mid ah walxo bir ah oo xoog badan leh oo leh sifooyin u dhow birta, waxay leedahay faa'iidooyinka qiimaha wax soo saarka hooseeya, ductility wanaagsan, xoog daal aad u fiican iyo iska caabin xidhid, iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican Waxaa si weyn loogu isticmaalaa sariirta mashiinka, waalka, crankshaft, piston, dhululubo iyo qaybaha kale ee mishiinka baabuurta. shubista caaryada lumay tignoolajiyadu waa nooc ka mid ah tignoolajiyada iyada oo aan la kala saarin, Habka samaynta saafiga ah ee dhow ee shubista saxda ah ee adag iyada oo aan cammuud ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarista birta shubka, birta shubka, aluminium aluminium iyo qaybaha aluminium magnesium. Habka lumay birta ductile, oo ka samaysan Sababo la xiriira content carbon sare, ballaarinta graphitization iyo sifooyin kale inta lagu guda jiro adke, tuuray laalaabkii dusha, godka yaraaday iyo porosity, madow carbon iyo cilladaha kale waxaa inta badan sababa waxqabadka daahan liidata. Natiijo ahaan, Hagaajinta sifooyinka dahaarka ee epc waa isku xirka muhiimka ah si loo hubiyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka.
Wax soo saarka epc, tayada dahaarka ayaa aad muhiim ugu ah tayada shubista. Dahaarka Epc waa inuu lahaadaa daalacasho wanaagsan, xoog, nadiifin iyo sifooyin diirran Sida waxqabadka. Waqtigan xaadirka ah, cilmi-baarista guud ahaan waxaa lagu fuliyaa sifooyinka shaqada ee daahan, habka isdhexgalka ee u dhexeeya daahan iyo alaabada EPS , saameynta daahan ee tayada shubista iyo daahan ka kooban dusha sare Cilmi-baarista, hagaajinta halabuurka daahan, saamiga wax-qabadka ee daahan, habka diyaarinta daahan. Laga soo bilaabo wax soo saarka iyo isticmaalka daahan epc, wax soo saarka ee daahan waa in la habeeyey Habka diyaarinta, wax-soo-saarka sare ee wax-soo-saarka; Suuqa daahan caaryada ah ee lumay waa fowdo, qaacidada daahan waa mid adag oo qaali ah, habka diyaarinta waa mid dhib badan, iyo xitaa halabuurka formula waa khalad. Kaliya maahan inay saamayso wax-soo-saarka epc-ka, laakiin sidoo kale waxay caqabad ku tahay horumarinta tignoolajiyada EPC iyo warshadaha daahan.
1 Shuruudaha dahaarka ee birta ductile ee tuurista epc
Heerkulka shubka birta nodular caadi ahaan waa 1380 ~ 1480℃, wax yar ka hooseeya kan birta shubka. Cufnaanta birta qanjirada ah waa 7.3g/cm3, oo aad uga sareysa tan magnesium iyo aluminium alloy, markaa dareeraha birta ee nodular Saamaynta kulaylka iyo xoogga dahaarka inta lagu jiro buuxinta ayaa aad uga muhiimsan tan magnesium iyo aluminium aluminium. Habka birta ductile ee epc, dahaarka wuxuu u shaqeeyaa sababtoo ah habka cadaadiska taban ee faakuumka Marka la eego gobolka, dhinaca kale, dhinaca gudaha ee dahaarka wuxuu u baahan yahay inuu iska caabiyo cadaadiska firfircoon iyo cadaadiska joogtada ah ee dareeraha heerkulka sare ee dareeraha birta, iyo cadaadiska gudaha iyo dibedda ee daahan waa weyn yahay, iyo daboolku waa sahlan yahay. marka heerkulka sare uusan ku filneyn Sababta tuurista dusha sare ama xitaa beddelka tuurista. Birta kabka nodular waxaa lagu gartaa heerkulka shubista sare iyo burburka degdega ah ee EPS. Badeecadaha gaaska ayaa ku xisaabtama inta badan alaabada burbursa, oo ay ku jiraan qadar yar oo dareere ah Wax soo saarka gobolka iyo adkaha. Badeecadaha jajaban ayaa la soo saaraa tiro badan waxayna buuxiyaan dhammaan godka dahaarka, si looga fogaado fashilka alaabta burburka si ay u soo saaraan dahaarka, taasoo keentay in daloolada birta ah iyo laalaabyada Dahaarku waa inay lahaadaan daloolin hawo wanaagsan oo loogu talagalay dhacdooyinka cilladaha sida maqaarka iyo kaydinta kaarboonka. Tusmada waxqabadka dahaarka waa in lagu xakameeyaa si macquul ah oo saameynaysa xoogga iyo qulqulka dahaarka. Dib-u-soo-celinta, hantida sinter-ka, qaabka isku-darka iyo cabbirka walxaha ayaa saameyn toos ah ku leh xoogga iyo dahaadhka epc. Habka diyaarinta dahaarka, lafaha u adkaysta dabka Xulashada maadada ayaa si gaar ah muhiim u ah.
2 Samaynta iyo habka daahan birta ductile ee epc
Isku darka refractory waa qaybta ugu muhiimsan ee daahan. Waxqabadka dahaarka wuxuu si dhow ula xiriiraa sifooyinka jirka iyo kiimikaad ee isku-darka refractory. Isticmaalka joojinta waxay ka hortagtaa isku geynta refractory ee rinjiga Sedimentation, si daahan uu leeyahay thixotropy wanaagsan. Inta lagu jiro habka shubista, dahaarka wuxuu u baahan yahay inuu maro saameyn kulayl xoog leh, iyo isticmaalka xarunta ee xirmooyinka kala duwan waxay hubisaa diyaarinta dahaarka Dahaarku wuxuu awood u leeyahay inuu ku ilaaliyo xoog heerkul kala duwan. Dahaarka laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa samaynta dahaarka si loo diyaariyo, dahaadhida iyo qalajinta saddex hab oo waaweyn. dahaarka tayada sare leh Material marka lagu daro waxqabadka wanaagsan, waxqabadkeeda teknoolajiyada sidoo kale waa mid aad muhiim u ah, diyaarinta daahan, hababka geeddi-socodka daahan waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo fudud, hawlgal ku habboon, dusha sare ee daahan oo siman, ma laha pinhole, dillaac iyo wixii la mid ah.
3 Dahaarka guryaha ee ductile iron epc tuurista
3.1 Xoogga dahaarka
Sida daahan daahan refractory ee dusha qaabka, daahan qaabka baaba'a oo leh xoog sare ma hagaajin karo oo kaliya xoogga iyo qallafsanaanta qaabka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida dareeraha birta ah iyo caaryada. Caqabadda wax ku oolka ah ee u dhaxaysa ciidda waxay hubisaa in dahaarka uu u adkeysan karo cadaadiska firfircoon ee joogtada ah iyo cadaadiska dibadda ee uu keeno habka buuxinta dareeraha heerkulka sare ee birta, wuxuuna yareeyaa ciidda farsamada ee dhejinta. Markaa xoogga dahaarka ayaa ah tilmaame muhiim ah oo lagu cabbiro waxqabadka dahaarka.
3.2 Daraasad ku saabsan porosity iyo permeability ee dahaarka
Daadinta birta dhalaalaysa, muuqaalka EPS ee hoos yimaada ficilka heerkulka sare ee degdega ah ee burburka gaaska, oo leh dareeraha birta hore, badeecooyinka ka soo baxa godka iyada oo loo marayo dheecaanka daahan, dareeraha birta Sii daynta buuxinta caaryada iyo alaabada qudhuntay waxay ku jirtaa dheelitirnaan firfircoon. Haddii dahaadhka hawada ee daahanku uu aad u hooseeyo, alaabta burbursan lagama soo saari karo godka wakhtiga, taas oo u horseedi doonta daloolada iyo cilladaha kaydinta kaarboonka ee maqaarka hoostiisa ee shubka. Iyo wixi la mida. Haddii xawliga hawada ee dahaarka uu aad u sarreeyo, xawaaraha buuxinta caaryada waa mid degdeg ah, si fududna u keeni kara ku dheggan ciidda farsamada. Kordhinta dhumucda dahaarka, saamaynta cufnaanta dahaarka ee qulqulka hawada ayaa si tartiib tartiib ah u yaraan doonta. Dheefshiidka sare Daahan wuxuu leeyahay dhexroorka qayb ka weyn celcelis ahaan iyo qaybinta size qayb ballaaran.
4 Saamaynta dahaarka ee cilladaha nodular birta tuur
4.1 Saamaynta dahaarka ee tuurista cilladaha duuduubka oogada
Qaabka lumay, marka muuqaalka EPS uu la kulmo habka burburka dareeraha birta heerkulkiisu sarreeyo, alaabada burburka dareeraha ah ee la sameeyay waxay ku sabbeeyaan dusha dareeraha birta ama waxay ku dhegaan daaha, taas oo ay adag tahay in si buuxda loo burburiyo. Marka birta Marka dareeraha la qaboojiyo oo la adkeeyo, xiisadda dusha sare ee hadhaaga qudhuntay way ka duwan tahay tan dareeraha ah. Marka ay wax ka shubashadu sii yaraanayso, laalaabyada hirdamaya ama luqunta ayaa ku samaysma maqaarka wax shubidda.
4.2 Saamaynta dahaarka ee tuurista cilladaha kaydinta kaarboonka
Cilladda kaydinta kaarboonka waxaa sababa kaarboonka badan ee la soo saaray ee dusha sare ee daahan, kaas oo aan laga saari karin daloolka oo ku dheggan dusha sare ee shubka. Caadi ahaan waxay ka muuqataa tuurista sida filimka kaarboonka oo leh dusha dhalaalaya. Godka tuurista waxaa ka buuxa kaarboon madow, iwm. Wax soo saarka epc, cilladaha tuurista waxay si dhow ula xiriiraan walxaha muuqaalka, halabuurka tuurista, dahaarka iyo habka shubista.
5 Jihada cilmi baarista ee dahaarka loogu talagalay shubista ductile iron epc
Birta kabka ah ee nodular waxay lumisay shubista caaryada, sababtoo ah heerkulkeeda sare ee qulqulaya, muuqaalka xumbo gaas weyn, shubid cufan. Dahaarka birta kabka nodular waxaa lagu sakhraa bir dhalaalaysa inta lagu jiro buuxinta caaryada Saamayn xoog leh oo xoog leh iyo kala duwanaanshaha cadaadiska gudaha iyo dibedda, dahaarka waa inuu lahaadaa xoog wanaagsan heerkulka sare, si looga hortago habka socodka dareeraha birta ayaa sababay nabaad-guurka dahaarka oo saameeya miiska shubka. Tayada dusha sare, sidaas darteed halabuurka iyo sifooyinka isku-darka refractory iyo saameynta wax lagu daro ee xoogga dahaarka ayaa noqda furaha si loo hagaajiyo waxqabadka daahan.
Waqtiga boostada: Nov-05-2021